စူပါတိုင်ဖွန်း(CAT-4)ဖြစ်လာနေတဲ့ PARMA | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA (ဖိလစ်ပိုင်အမည် PEPENG) သည် အဆင့်အမြင့်ဆုံး စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး CAT-5 အဆင့်သို့ သောကြာနေ့(အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်) မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆ နာရီခွဲ 00:00GMT ရောက်ရှိလာတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုခန့်မှန်းအချိန်မှာ လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်းဖြစ်ပါသည်။
မုန်တိုင်း၏လမ်းကြောင်းအား အပြည်အပြည်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ ခန့်မှန်းချက်ပုံကို အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ၄င်းပုံအရ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းနှင့် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတို့သည် စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း၏ ဒဏ်ကို အဆိုးရွားဆုံး ခံစားကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မုန်တိုင်း အဆင့် စူပါတိုင်ဖွန်း CAT-5 သို့ရောက်ရှိပါက လေတိုက်နှုန်း တစ်ရီလျှင် ၁၅၆ မိုင်မှ အထက်နှုန်း ဖြင့် တိုက်ခတ်မည်ဖြစ်ပြီး မိုးကြီးမှုများကြောင့် မြေပြိုခြင်း၊ ရေလွှမ်းခြင်းများလည်း ဆိုးရွားစွာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း မုန်တိုင်း KETSANA က သင်္ခဏ်းစာ ပေးသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
မုန်တိုင်းသည် ယခု အချိန်တွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့တော်၏ အရှေ့-အရှေ့တောင်ဘက် ၆၁၅ မိုင်ခန့်တွင် ရောက်ရှိဗဟိုပြုနေပြီး – အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် ၁၅ မိုင်နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားလျှက်ရှိနေပါသည်။ မုန်တိုင်း၏ ဗဟိုတွင် မုန်တိုင်းဒီရေ အမြင့် ၂၈ အထိ ရှိနေကြောင်း WUND ခန့်မှန်းချက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် အဆင့်-၄ CAT4 စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည့် မုန်တိုင်းတည်နေရာနှင့် အင်အားအဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲမှုဇယားကို post အောက်ဆုံးတွင် ဖေါ်ပြပေးထားပါသည်။
Tracking Info For Super Typhoon Parma
18 GMT 09/27/09  9.7N 145.6E     35       Tropical Depression
18 GMT 09/28/09  9.7N 145.6E     35       Tropical Depression
00 GMT 09/28/09  9.4N 144.6E     35       Tropical Depression
06 GMT 09/28/09  9.3N 144.1E     35       Tropical Depression
12 GMT 09/28/09  9.3N 142.8E     40       Tropical Storm
00 GMT 09/29/09  8.2N 139.6E     45       Tropical Storm
06 GMT 09/29/09  7.8N 138.9E     50       Tropical Storm
12 GMT 09/29/09  8.0N 138.2E     50       Tropical Storm
00 GMT 09/30/09  9.0N 136.8E     75       Category 1
06 GMT 09/30/09  9.9N 135.3E     85       Category 1
12 GMT 09/30/09  10.6N 133.9E     85       Category 1
18 GMT 09/30/09  11.3N 132.5E    115       Category 3
18 GMT 10/01/09  11.3N 132.5E    115       Category 3
00 GMT 10/01/09  11.8N 131.1E    150       Category 4
လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှုအား monitor လုပ်ရန်
Posted in Education, Weather Alert, Weather News. Tags: PARMA, super-typhoon, typhoon, weather.4Comments »
4 Responses to “စူပါတိုင်ဖွန်း(CAT-4)ဖြစ်လာနေတဲ့ PARMA”
T2K မှ updated image
Forecast Outlook: By T2K
PARMA is expected to maintain its WNW track across the warm Philippine Sea and further intensify.
The2to 5-day Long-Range Forecast shows the system at its closest point of approach (CPA) to Bicol Region – about 300 km.
NE of Metro Naga/CWC on Friday evening, with Category4strength of 215-220 kph near its EYE…and shall slow down while approaching the Northeastern corner of Luzon (Cagayan-Isabela).
The core (eye and eyewall) shall pass very close to the NE tip of Cagayan late Sunday afternoon (Oct 4) and shall further slow down but reaching Super Typhoon strength (240 kph) as it enters the Balintang Channel early Monday morning (Oct 5).
PARMA shall pass directly or very close to the Batanes Group of Islands early Tuesday morning (Oct 6) as it moves towards Southern Taiwan.
Please be aware that long-range forecast changes every now and then. Continued monitoring on this potential typhoon isamust for disaster preparedness agencies.
PARMA TRACK UPDATE 1200 mmtime
« အင်ဒိုနီးရှားတွင် ငလျှင်ပြင်းလှုပ်
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA update »